Herinandro mantsina… herin’ny andro masina | NewsMada
Herinandro mantsina… herin’ny andro masina
Par Taratra sur 15/04/2017
Ho an’ny kristianina, mamarana ny herinandro masina izao: nandehanana tamin’ny lalan’ny hazo fijaliana. Ho an’ny fitondrana, herinandro mantsina… Tsy inona fa noho ny « Raharaha Razaimamonjy Claudine« , manamaimbo an-toerana azy.
Hatrany am-boalohany, efa maimbo amin’ny raharaha kolikoly hoe avo lenta ny fitondrana sy izay akaiky azy ao. Porofo ny fisian’ny nahandro tsy mivoa-pofona izay ela izay ny niseho tamin’ity herinandro ity: afa-pofona tanteraka ny fitondrana.
Tsy ahiahy na fanaratsiana intsony izao, fa miara-mahita sy mandre ny rehetra. Resaka ihany ny hoe fanjakana tan-dalàna. Ny mpitondra no tena tsy manaja lalàna, ka ny vahoaka no hoe hampahafantarina izany hanafoanana ny fitsaram-bahoaka.
Ahoana, ohatra, ny fandefasana olona voarara tsy hivoaka an’i Madagasikara? Tafaporitsaka ihany noho ny tsy fanarahan-dalàna na tsikombakomba… Tomponandraki-panjakana ambony no hoe atidohaben’ny raharaha maloto amin’izany?
Raha mba misy ny hoe fampiharan-dalàna, izay manelingelina mpitondra sy tsy tiany ihany no ampitondrainy faisana etsy sy eroa. Izay ilay hoe mizana tsindrina ila. Manamantsina ny fitondrana izany amin’ny hoe fanjakana tsy tan-dalàna.
Samy nitaona olona, ohatra, ny loholona roa: ny iray, nilaza hoe aza misy mivoaka ny trano, namoaka didy fampisamborana sy notsaraina ary voasazy. Ny faharoa, nitondra andian’olona nitora-bato tranom-panjakana, tsy misy resaka fa odian-tsy fantatra.
Resaka sy fampandriana adrisa ihany ny kabary ambony vavahady mampievotrevotra amin’izay hoe ady amin’ny kolikoly, fanjakana tan-dalàna… Raha vao voasaringotra ny mpiara-komana: mikoropaka, manao ny tsy fanao, miray hina…
Manamantsina ny fitondrana ity herinandro ity ny « Raharaha Razaimamonjy Claudine« . Tsy araka izay firain’ny vava ny atao. Ny hafa hatrany no lazaina ho diso amin’ny raharaha maloto, firaisana tsikombakomba, tsy fahombiazana…
Mbola hisy ve ny famonjena na fitsanganan’ny efa maty eritreritra, lany henatra… ? Herin’ny andro masina amin’izao Paka na Paska izao.